I Pooka Scale | Kuvele Irish Whiskey zokuhlolwa Umhlahlandlela
I Pooka Irish Whiskey isikali sidalwe Irish umbhali Whisky uStuart McNamara njengento esizayo futhi Umhlahlandlela Whisky abaphuza entsha ababezama zifezeke umehluko phakathi inqwaba izinhlobo ezahlukene kanye brand kagavini Irish.
Stuart uyazicabangela eziningi kufaka phakathi izinga, intengo, isakhiwo kanye nobudala kanye nezinye izinto eziningi ukuthi uma kwenziwa i-Irish nogologo ekhethekile. Nakuba intengo ingenye ukucabangela, ngezinye izikhathi intengo kungaba kabanzi mayelana ukumaketha kanye emaphaketheni kuka mayelana whiskey. I Pooka esikalini nje mayelana whiskey.
I Pooka Irish Whiskey Scale ~ An Irish Whiskey Beginners zokuhlolwa Umhlahlandlela
I Pooka Irish Whiskey isikali yakhelwe ukuthatha imfundamakhwela Irish Whiskey ophuzayo ku uhambo okuqhubekayo ukutholakala kusukela ukuphuza lula olulodwa okusanhlamvu likagologo okusanhlamvu-esindayo whiskeys ezihlangene ngokusebenzisa Single Malt futhi Embizeni Whiskeys Namanje Irish ezithinta eyinkimbinkimbi okukhulu, ukujula uhlamvu kusuka ziphuzo zazihluzwa, Ukuxubana futhi noma nokuvuthwa.
Omunye Pooka Irish nogologo kuyinto nogologo zonke wosuku. Nantu uhlobo kagavini ukuthi ziyoyizwa esitolo noma ilayisensi yendawo off.
Lawa evamile kumnandi whiskeys Irish sokuphuza Lihle, noma nge-Ice kanye labathaki bamafutha noma cocktail, Whiskeys Zezıhlabane noma Coffees Irish.
Kaningi baba ihlangana ebhodweni namanje noma lwemithombo nogologo ne ukuxegiselwa, imnandi, okusanhlamvu nogologo ungeze ukubenza elula ukuphuza nogologo Irish Wabasaqalayo. Izibonelo Omunye Pooka Irish Whiskeys zihlanganisa Tullamore namazolo, Jameson, Paddy, Bushmills White Label futhi Amandla.
Amabili Pooka Irish whiskeys kusobala umhuzuko ngenhla Omunye Pooka whiskeys. Lezi whiskeys ekhethekile zonke unokuthile ahlukile noma ekhethekile uhlamvu yabo ngokusebenzisa kwendingilizi noma nokuvuthwa ukuthi luwathathe ezingeni elilandelayo.
Kungenzeka ukuthi abaneminyaka isikhathi eside noma imiphongolo ezikhethekile ezifana Sherry noma Madeira emiphongolweni. Kungenzeka Omunye Pooka whiskeys eziye tweaked noma ngcono ngokuxubanisa nabo whiskeys kangcono ngisho. ngokuvamile, kodwa ngaso sonke isikhathi, zibiza kancane ezingaphezu kuka Omunye Pooka whiskeys.
Ziyakwazi isinyathelo esilandelayo ekubeni i-Irish nogologo aficionado.
Izibonelo ezimbili Pooka Irish Whiskeys zihlanganisa Green Spot, Hyde Whisky, Teeling Iqoqwana Encane, Tullamore namazolo Cider Qeda, Jameson Black Wemigqomo, Slane Whisky and Amandla amathathu Swallow.
Three Pooka Irish Whiskeys kukhona Premium Irish Whiskeys. ngokuvamile Ziyakwazi double noma Treble intengo One Pooka Whisky, kodwa ke ningalenzi iphutha, nibaluleke ke! Kulelizinga, Ngingathanda asikisela kungenzeka ukuthi ulahla imali yakho uma wengeza ice noma labathaki bamafutha noma usebenzise i-Coffee Irish noma Zezıhlabane Toddy. Ngemva kwakho konke, Ungathanda ukwengeza iziphuzo zezithelo noma ice a iwayini elimnandi? Phuza amathathu Pooka whiskeys Lihle noma nge ukusaphazela noma amabili amanzi ekuvuleni iphunga lawo noma ekhaleni futhi ukunambitheka. Three Pooka Whiskeys ngokuvamile ezakha ingxenye enkulu yomsebenzi iqoqo nogologo aficionado sika. Stuart sika ezintathu Pooka eziphezulu Ithiphu ukuthenga ezahlukene ezintathu Pooka whiskey kanye zakamuva ezintathu Pooka ukuthenga kwakho ingenye yesithathu ku uhhafu ezingenalutho. Ngaleyo ndlela uzoqala ukwakha ibuthelelo nice nengxenye egcwele ezintathu Pooka whiskeys ukwabelana ingilazi kusukela lapho wena ngalolo enhle nogologo kwemizwelo!
Izibonelo ezintathu Pooka Irish Whiskeys zihlanganisa Yellow Spot, Tullamore namazolo Phoenix, Redbreast 15 Umnyaka owodwa, Redbreast Lustau, futhi Lane Amandla kaJohane.
Four Pooka Irish Whiskeys kukhona Super-Premium Irish Whiskeys. Ivamise abiza phakathi € 100 € 1,000 futhi nakanjani kakhulu, ukuthenga okukhetheke kakhulu ngokwesilinganiso Irish Whiskey aficionado noma ngalendoda. Cabanga ngabo njengoba Lokuzalwa Special noma Christmas samanje impahla komuntu nogologo empilweni yakho! Kodwa qiniseka, awusoze wazisola ukuthengwa njengoba nogologo Four Pooka lingase ukunikeza eminyakeni embalwa wokuzijabulisa ngaphambi kokuthoma komlandu lingenamuntu futhi ibhodlela usuphinde Memento siyazise ku eshalofini bakho iminyaka eminingi ngaphezulu.
Izibonelo Four Pooka Irish Whiskeys zihlanganisa Midleton Ezingavamile kakhulu, Midleton Barry Crockett, Redbreast 21 Unyaka emidala Midleton Dair Ghaelach.
Five Pooka Irish Whiskeys kukhona Hyper-Premium Irish Whiskeys. Bavame ezingajwayelekile kakhulu, noma ngokusebenzisa ubudala noma bottling elinganiselwe. Ivamise abiza okweqa € 1,000 futhi kuyadabukisa, ngoba lokhu ngokuvamile wathenga njengoba izimali, ukungalokothi esiphuzwayo esikunoma futhi ngajabulela. Lawa Kusobala ukuthi wokuthenga isilinganiso Irish Whiskey Fan! noma, mhlawumbe kungaba! Stuart kwaba muva nenhlanhla ukumenywa kwethulwa iminyaka engu-ibhodlela olukhethekile brand Premium Irish Whiskey kubiza € 6,000 ngokuthi utholakala ngebhodlela noma € 300 ingilazi. Senzeka kuye ukuthi emidlalweni eminingi namaqembu social ngokuvamile ukuhlela uhambo olukhethekile futhi omunye off nemicimbi amalungu abo kubiza okweqa € 300. Cabanga fun a Whisky Club bebengaba uma wathenga ibhodlela € 6,000 kagavini phakathi 20 amalungu e-€ 300 ingilazi. Cabanga izindaba nezinkumbulo kusukela ebusuku wena Zaziphuza okungcono nogologo Irish eyake yenziwa. Yilokho Five Pooka Irish Whiskey kufanele kube ngempela!
Isibonelo esihle kakhulu a Five Pooka Irish Whiskey kuyinto Midleton Pearl okuyinto iminyaka engu-30 edition elinganiselwe (nje 117 amabhodlela ekhiqizwa) we kunako konke Midleton ezihlangene nogologo eyake yaba khona usebenzisa 30 nonyaka ubudala okusanhlamvu olulodwa futhi imbiza olulodwa namanje izinkulumo Ukhethwe Midleton sika Master Distiller Emeritus Barry Crockett futhi Midleton yamanje Master Distiller Brian Nation.
I Pooka Umlando ~ Yini A Pooka?
Amabili Irish Pookas ukululekana fireside. Kusukela INkosi Cats, ngu-Eileen O'Faolain, kuboniswa Irish Impressionist Umculi Nano Reid
Ngo temdzabu Irish lasendulo, the Pooka noma Puca e Gaelic uyisidalwa wasenganekwaneni emimoya Irish ukuthi uhlala emaphandleni yasemakhaya. Whisky ingenye uhlobo friendly uMoya Irish. I Pooka uwuhlobo oluhlukile of friendly uMoya Irish. Ngakho kukhethwa igama isikali yethu!
Le nguqulo yesiNgisi Pooka kuyinto Puck owayeneminyaka nengxenye ziyathanjiswa futhi abanonya ehlathini Fairy abangathanda ukunikela iseluleko nosizo kulabo yakuthanda. Rudyard Kipling wabhala incwadi ngazo ngokuthi Puck of Pook sika Hill.
I Pookas kuthiwa imimoya zezizwe iqhawe Celtic lasendulo ezifana wasenganekwaneni Tuatha Dé Danann kanye fir Bolg eyakha futhi aphila ngokunethezeka Irish lasendulo Ring Forts noma Fairy Forts iminyaka eyinkulungwane ngesikhathi Neolithic seSimbi kanye Bronze Age engaphezu kwezinkulungwane ezimbili edlule. Ring Forts eyakhelwe eduze emachibini amanzi babaziwa ngokuthi Crannogs.
Izinkulungwane Fairy Forts esekhona usinde esenjalo kuwo namathafa Irish namuhla manje kuthiwa inthanethi kuya imilingo umoya lemimoya yasendulo Celtic Pookas naBantu Fairy.
Kuthiwa omunye Pooka uMoya kulinda indandatho ngamunye encane Fort futhi Pookas abafinyelela kwabahlanu aqaphe izinqaba ngobukhulu obekufanele ekhaya ukuze Irish izikhulu kanye AmaKhosi High iminyaka eyinkulungwane nokuningi edlule.
Kuze kube namuhla, abalimi kanye nezwe abathuthukisi yasemakhaya Ireland emsebenzini kunokuba ukubhubhisa noma iphazamise emizini Pooka ukugwema amashwa kanye Intukuthelo yomphakathi.
It kubhekwa lucky e-Ireland ukuze abe Fairy Fort ezweni lakho, njengoba uma sihlonipha umhlali Pooka, uyosebenza e ukubuya, ukuhlonipha kanye ukuvikela wena nomndeni wakho. Ezikhathini ukukhathazeka noma enkingeni, the Pooka izovela uhlobo isilwane esincane Elf noma ukukhuluma (ngokuvamile ihhashi emnyama noma emhlophe) ukunikeza isiqondiso, ngokuhlakanipha nokusekelwa omlingo aphethe umndeni wakhe.
Ngakho lokho igama kangcono yethu Irish Whiskey Scale ngaphandle Pooka Scale. friendly, Irish Whiskey Ukuhlakanipha kusukela zi oyedwa kuya kwabahlanu Pookas; friendly uMoya Irish Kuqondisa ukukuholela ngokwakho Irish Whiskey olunezinto yakho.